ကမျးလှနျရနေံတှငျး ပိုကျလိုငျးပေါကျလို့ သမုဒ်ဒရာရပွေငျပျေါမှာ မီးမကျြလုံးကွီးပျေါ - SANTHITSA
မောငျယဿ ( ဇူလိုငျ ၃ )
မနကေ့ မနကျအစောပိုငျးမှာ မက်ကဆီကို ယူကာတနျ ကြှနျးဆှယျ အနောကျပိုငျး သမုဒ်ဒရာ ထဲကကမျးလှနျ ရနေံတှငျးတူးစငျ တဈစငျရဲ့ ရအေောကျ ဓာတျငှပေို့ကျလိုငျးပေါကျပွီး မီးလောငျကြှမျးမှုဖွဈပှားရာက သမုဒ်ဒရာရပွေငျထကျမှာ မကျြလုံးပုံစံ မီးလောငျပွငျကွီး ဖွဈခဲ့လို့ ငရဲဂိတျဝ ဆိုပွီး နာမညျပေးခံလိုကျရပါတယျ။ အဲ့ဒိအကွောငျးက အှနျလိုငျးပျေါမှာပြံ့နှံ့သှားလို့ လူပွောသူပွော မြားခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒိကမျးလှနျရနေံစငျကမီးလောငျကြှမျးမှု ဗီဒီယိုဖိုငျ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ပွနျ့နှံသှားတာနဲ့ ပတျသကျပွီး အစိုးရပိုငျးက ရနေံတူး ကုမ်ပဏီ ပရီမကျဈကို ပွဈတငျမှုပွုထားပါတယျ။
တောကျပလှနျးတဲ့ လိမ်မျောရောငျး မီးကှငျးကွီးက ပငျလယျရအေထကျကို ဘှားကနဲပျေါထှကျလာပါတယျ။ အဲ့ဒိမီးကှငျးကွီးက ရုပျရှငျကားတှထေဲက ပုံစံမြိုး မီးမကျြလုံး နဲ့ အရမျးကို တူပါတယျ။
အဲ့ဒိမီးမကျြလုံးကွီးက ရနေံတူးစငျနဲ့ မနီးမဝေး မှာပျေါလာတာပါ။ အနညျးဆုံး ၅နာရီလောကျကွာအောငျပျေါ ခဲ့တယျလို့ ပရီမကျဈက ဆိုပါတယျ။
ရနေံတှငျးတူးစငျနဲ့ အလံပွသဘောင်္ကွားက ပိုကျလိုငျးပေါကျပွီး သမုဒ်ဒရာရပွေငျပျေါမှာ မီးတှလေောငျခဲ့ပမေဲ့ ရနေံစိမျးတှေ ဖိတျလှငျ့စငျ ခွငျး မရှိခဲ့ဘူးလို့လညျးဆိုပါတယျ။
မီးမကျြလုံးကွီးက မနကျ၅နာရီခှဲလောကျမှာ စဖွဈပွီး မနကျ ၁၀ နာရီ ကြျောမှာ မီးငွိမျးသှားပါတယျ.။ ထိခိုကျဒဏျရာရသူ စာရငျးမရသေးပါဘူး။.
ဖွဈစဉျအသေးစိတျကို ကုမ်ပဏီက စုံစမျးဆဲဖွဈပွီး မက်ကဆီကို ရနေံထုတျလုပျမှု ဘေးကငျးရေးဆိုငျရာ အဖှဲ့ ဥက်ကဌ အိနျဂယျြကာရီဇယျ က “ ကမြတို့ သိရသလောကျကတော့ ၁ပေ အခငျြးရှိတဲ့ပိုကျလိုငျးရဲ့ အဆို့ရှငျ တဈခုပှငျ့သှားတာလို့ အကွမျးဖဉျြးသိရပါတယျ။ ရနေံဖိတျစငျမှုတှေ ရနေံကှကျတှေ ဖွဈပျေါမှုကတော့ မရှိပါဘူး” လို့ ဆိုပါတယျ။
အဲ့ဒိရနေံတှငျးတူးစငျရဲ့ နာမညျက ကူမာလော့ဖတျဖွဈပွီး ပရီမတျဈရနေံကုမ်ပဏီရဲ့ ၄၀%သောရနေံစိမျးတှကေို အဲ့ ဒိစငျက ထှကျတာပါ။ တဈရကျကို ရနေံစိမျးစညျ ၁.၇ သနျးလောကျထှကျပါတယျ။
တှငျးတူစငျရဲ့ တာဝနျခံတဈဦးကတော့ ကနြျောတို့ မိုးကွိုးတှပေဈ မိုးတှသေညျးတာကိုကွုံ နရေပါတယျ။ မနကျစောစော ကနြေျာ့တာဝနျခြိနျအတှငျးမှာပဲရပွေငျထကျမှာ မီးကှငျးကွီးပျေါလာတာပါပဲ။
ကနြျောတို့ နိုကျထရိုဂငျြဓာတျငှတှေ့သေုံးပွီး မီးငွိမျးသကျနိုငျအောငျကွိုးစားခဲ့ပါတယျ” လို့ ဆိုပါတယျ။ ကုမ်ပဏီတာဝနျရှိသူတှကေတော့ လောလောဆယျ ဘာမှ အဖွမေပေးနိုငျသေးပါဘူးလို့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ မှာဆိုထားပါတယျ။
REF: ,Reuter Photo: Credit world of buzz
ကမ်းလွန်ရေနံတွင်း ပိုက်လိုင်းပေါက်လို့ သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပေါ်မှာ မီးမျက်လုံးကြီးပေါ်
မောင်ယဿ ( ဇူလိုင် ၃ )
မနေ့က မနက်အစောပိုင်းမှာ မက္ကဆီကို ယူကာတန် ကျွန်းဆွယ် အနောက်ပိုင်း သမုဒ္ဒရာ ထဲကကမ်းလွန် ရေနံတွင်းတူးစင် တစ်စင်ရဲ့ ရေအောက် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းပေါက်ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားရာက သမုဒ္ဒရာရေပြင်ထက်မှာ မျက်လုံးပုံစံ မီးလောင်ပြင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့လို့ ငရဲဂိတ်ဝ ဆိုပြီး နာမည်ပေးခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒိအကြောင်းက အွန်လိုင်းပေါ်မှာပျံ့နှံ့သွားလို့ လူပြောသူပြော များခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒိကမ်းလွန်ရေနံစင်ကမီးလောင်ကျွမ်းမှု ဗီဒီယိုဖိုင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်နှံသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရပိုင်းက ရေနံတူး ကုမ္ပဏီ ပရီမက်စ်ကို ပြစ်တင်မှုပြုထားပါတယ်။
တောက်ပလွန်းတဲ့ လိမ္မော်ရောင်း မီးကွင်းကြီးက ပင်လယ်ရေအထက်ကို ဘွားကနဲပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒိမီးကွင်းကြီးက ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲက ပုံစံမျိုး မီးမျက်လုံး နဲ့ အရမ်းကို တူပါတယ်။
အဲ့ဒိမီးမျက်လုံးကြီးက ရေနံတူးစင်နဲ့ မနီးမဝေး မှာပေါ်လာတာပါ။ အနည်းဆုံး ၅နာရီလောက်ကြာအောင်ပေါ် ခဲ့တယ်လို့ ပရီမက်စ်က ဆိုပါတယ်။
ရေနံတွင်းတူးစင်နဲ့ အလံပြသဘောင်္ကြားက ပိုက်လိုင်းပေါက်ပြီး သမုဒ္ဒရာရေပြင်ပေါ်မှာ မီးတွေလောင်ခဲ့ပေမဲ့ ရေနံစိမ်းတွေ ဖိတ်လွှင့်စင် ခြင်း မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။
မီးမျက်လုံးကြီးက မနက်၅နာရီခွဲလောက်မှာ စဖြစ်ပြီး မနက် ၁၀ နာရီ ကျော်မှာ မီးငြိမ်းသွားပါတယ်.။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ စာရင်းမရသေးပါဘူး။.
ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကို ကုမ္ပဏီက စုံစမ်းဆဲဖြစ်ပြီး မက္ကဆီကို ရေနံထုတ်လုပ်မှု ဘေးကင်းရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ဥက္ကဌ အိန်ဂျယ်ကာရီဇယ် က “ ကျမတို့ သိရသလောက်ကတော့ ၁ပေ အချင်းရှိတဲ့ပိုက်လိုင်းရဲ့ အဆို့ရှင် တစ်ခုပွင့်သွားတာလို့ အကြမ်းဖျဉ်းသိရပါတယ်။ ရေနံဖိတ်စင်မှုတွေ ရေနံကွက်တွေ ဖြစ်ပေါ်မှုကတော့ မရှိပါဘူး” လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒိရေနံတွင်းတူးစင်ရဲ့ နာမည်က ကူမာလော့ဖတ်ဖြစ်ပြီး ပရီမတ်စ်ရေနံကုမ္ပဏီရဲ့ ၄၀%သောရေနံစိမ်းတွေကို အဲ့ ဒိစင်က ထွက်တာပါ။ တစ်ရက်ကို ရေနံစိမ်းစည် ၁.၇ သန်းလောက်ထွက်ပါတယ်။
တွင်းတူစင်ရဲ့ တာဝန်ခံတစ်ဦးကတော့ ကျနော်တို့ မိုးကြိုးတွေပစ် မိုးတွေသည်းတာကိုကြုံ နေရပါတယ်။ မနက်စောစော ကျနော့်တာဝန်ချိန်အတွင်းမှာပဲရေပြင်ထက်မှာ မီးကွင်းကြီးပေါ်လာတာပါပဲ။
ကျနော်တို့ နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့တွေသုံးပြီး မီးငြိမ်းသက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ လောလောဆယ် ဘာမှ အဖြေမပေးနိုင်သေးပါဘူးလို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာဆိုထားပါတယ်။
REF: Reuter Photo: world of buzz
Total Hits : 2530354